पाँचौं संसद बैठकमा कसले के भने ? – Sajha Bisaunee
पाँचौं संसद बैठकमा कसले के भने ?
। १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार १५:२६ मा प्रकाशित
कर्णाली प्रदेशको पाँचौं संसद बैठक मंगलवार सम्पन्न भयो । बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको पक्षमा विश्वासको मत व्यक्त गर्न राखेको प्रस्तावमाथि छलफल भयो । जसमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपाली, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सोशीला शाहीले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएर आफ्ना धारणा राखेका थिए । प्रस्तुत छ, उनीहरूको सोही धारणाको सम्पादित अंशः
‘अरुलाई सन्देश दिने गरी काम गरौं’
प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको आवश्यकता र जनताको भावना अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको राजनीतिक संस्कारमा अहिलेसम्म एकता र सहकार्यको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक अवस्था बढी छ । तर हामी त्यसबाट पाठ सिकेर सकारात्मक सन्देश दिनेगरी काम गर्नुपर्नेछ । एउटा उदाहरणीय प्रदेशको रूपमा लिन सकिने गरी अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो यो प्रदेश अरू प्रदेशको जस्तो होइन भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौं । त्यसैले सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने छ । सरकारले मात्रै वा सरकारमा सामेल भएकाले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन । सरकार बाहिर रहेकाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हिजोको तितो यथार्यबाट सिकेर हामी अघि बढ्न सक्यौं भने मात्रै सफल हुनेछौं । सहकार्यलाई मजबुत बनाउन सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ । सबै पार्टीभित्र राम्रा र नराम्रा कुराहरू होलान् । तर प्रदेश बनाउने काममा सबै एक हुनैपर्छ । यसमा प्रतिपक्षी दलको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा मैले गरेको छु ।
हामी नयाँ संरचनाको सरकार बनाएका छौं । संविधानत तीन वटा चरणको सरकारको अभ्यासमा छौं । सरकारको अधिकार संविधानमा किटान गरिएको छ । त्यसैले तीन वटै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनु अनिवार्य छ । कर्णाली प्रदेशको विकास र निर्माणका लागि सत्ताधारी पार्टी मात्र होइन सबैलाई सँगसँगै हिँडाउनका लागि सरकारको नेतृत्व सफल हुनुपर्दछ । सरकारले सबैलाई एकैपटक सबै कुरा पु¥याउन सम्भव हुँदैन । अनेक असन्तुष्टि आउने सम्भावना पनि रहन्छ । तर सबैसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढेको खण्डमा राम्रा कामहरू गर्न सकिन्छ । अहिले देशले कर्णाली प्रदेशलाई हेरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिलेर हामीले जसरी काम गरिरहेका छौं त्यो सबैले चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था छ । यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनका लागि सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हिजो गरिबी, पिछडिएको प्रदेशको रूपमा सबैले हामीलाई हेरिरहेका थिए भने आज हामीले सहकार्यमार्फत गरिरहेको कामलाई पनि सबैले हेरिरहेका छन् । जसरी आज सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि एकजस्तै भएर काम गरिरहेका छौं । त्यो अरुका लागि पनि उदाहरणीय बन्नसक्दछ । यो प्रदेशलाई सबैले सधैंभरी सकारात्मक कामका लागि हेरिरहने बनाउने गरी हामी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आफूलाई सत्तापक्षको रूपमा मात्रै हेरेर नभइ सबै मिलेर प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने भावनाका आधारबाट काम गर्ने र गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै हामीले समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सक्दछौं ।
पहिला मन्त्री छनौट गरेर त्यसपछि मन्त्रालय स्थापना गरेर मात्रै कर्मचारीहरू खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अभावका बीच सरकार सञ्चालन भएको छ । त्यसैले सरकार अहिले व्यवस्थापकीय कार्यमा व्यस्त हुनु परिरहेको होला । सँगसँगै वर्तमान आवश्यकताका बारेमा प्रदेश सरकारले विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि म सरकारलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।
‘हातेमालो गरेर अघि बढौं’
नेकपा माओवादी संसदीय दल
हिजोसम्म कर्णालीलाई जुन दृष्टिकोणबाट हेरिन्थ्यो अब त्यसलाई बदल्नुपर्नेछ । त्यो दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ । हालसमम कर्णाली प्रदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकता गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । शिशु जन्मिनुअघि र जन्मिसकेपछि पनि उसको वृद्धि र विकासका लागि आमालाई सन्तुलित आहार विहार चाहिन्छ । ठीक त्यसैगरी यो प्रदेशको विकासका लागि उचित स्याहार–सुसार र आवश्य छ । त्यसो भयो भने मात्रै प्रदेशले आफूलाई अव्बल बनाउने छ । यो प्रदेशको आवश्यकतालाई मध्यजनर गरी सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नु जरुरी छ । सरकार भर्खरै निर्माण भएको छ । अहिले नै सरकारले के कस्ता कमी र कमजोरी गर्यो भनेर खोज्दै हिँड्नेबेला होइन । अहिले त हामी सबैले सरकारलाई सहयोग गर्ने समय हो । म सबै पक्षलाई त्यसका लागि आव्हान पनि गर्दछु ।
राजकीय र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । त्यसैअनुसार सरकारका गठन भएको छ । यो प्रदेश बहुजातिक विविधिता भएको प्रदेश हो । हामी यसमा एकताबद्ध भएका छौं । राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने पक्षमा हिजो हामीले राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यौं । संघीय संरचनामा देश अगाडि बढेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं । भौगालिक हिसाबले ठूलो र हालसम्म पिछडिएको यो प्रदेशले सबैभन्दा पहिला नामकारण गरेर र राजधानी तोकेर अरुलाई पनि नयाँ सन्देश दिएको छ ।
अब सरकारले योजनाबद्ध रूपमा आफ्ना काम अघि बढाउनुपर्दछ । सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । कृषिलाई आधुनीकीकरण गर्ने, शैक्षिक विकास गर्ने र यातायात विकास गर्नेदेखि लिएर ऊर्जाको विकास र सुशासनयुक्त प्रदेश स्थापनामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सरकार जवाफदेही बन्ने विश्वास मैले लिएको छु । प्राकृतिक प्रकोपका कारण विपद्मा परेका जनताहरू पनि यो प्रदेशमा छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनादेखि सामाजिक न्याय, सुरक्षा र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने गरी हामीले हिजो जसरी जनताकाबीचमा प्रतिबद्धता र संकल्प गरेका थियौं सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर उकास्कनका लागि विकास र कार्यक्रम सरकारले ल्याउन जरुरी छ ।
निर्वाचनका क्रममा जनताका बीचमा राष्ट्रको समृद्धि र विकासका निम्ति भनेर वाम सहकार्य गरिएको थियो त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरेर जिम्मेवारी दिएका छन् । अब प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समाजवादको आधार स्थापित गर्न एकजुट हुनुको विकल्प छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र संसदीय अभ्यास हुन्छ । र यो प्रदेशको सुन्दर पक्ष भजनेको नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो नदेखिएर मिलेर काम गर्नु हो । यसको उदाहरण भनेको राजधानीको नामाकारण र राजधानी तोक्ने प्रस्ताव र निर्णय नै हो । सरकार चलाउने र प्रतिपक्षमा बस्ने सबै एकमत भएर जानुपर्ने आजको वस्तुगत आवश्यकता हो । कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि पनि यो त्यो जरुरी छ ।
‘समृद्ध प्रदेश बनाउने दायित्व सबैको हो’
हामी कर्णाली प्रदेशले परिचित छौं । प्रदेशको विकास गर्न हामी एक हनु आवश्यक छ । सबैको सहयोगविना प्रदेशको विकास हुन सक्दैन । विगतमा देखिएको राजनीतिक संस्कारमा हामीभित्र पनि कसलाई उचाल्ने र कसलाई पछार्ने भन्ने रोग छ । यो रोग अब नदेखियोस् । नेपाली कांग्रेसले हिजो पनि संविधान निर्माणको अगुवाइ ग¥यो । अहिले आएर तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा पनि कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । निर्वाचनको परिणाम जे जस्तो आए पनि हामी प्रदेश र मुलुक निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छौं । महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । कुनै दिन यहाँका जनताले ‘शाही शासन मुर्दावाद’ भन्ने दिन नआओस् । म यो सुझाव दिन चाहन्छु । आज मलाई दुःख लागिरहेको छ । सत्तापक्षीयहरूले प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने निर्णयविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन् । यो गलत छ, सरकारले पनि यसको विरोध गर्नुपर्दछ । आज यो मुलुकमा प्रदेशको नामारकण गर्ने र राजधानी तोक्ने कामले पनि संघीयता खतरामा पर्छ कि भन्ने डर सिर्जना भइरहेको अवस्था छ । तर कर्णाली प्रदेशले त्यसलाई चिरेको छ ।
अब हामीले यो प्रदेशका लागि सोच्ने कुरा के हो भने, यो प्रदेशले के दिन्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले क दिन सक्छौं भनेर सोच्नुपर्छ । अहिले निकै राम्रो र ठूलो अर्थ दिने शब्दहरू जनतालाई सुनाएर फकाउने गरिएको छ । बोलेर मात्र होइन ती शब्दहरूको अर्थ अनुसार जीउन सक्नुपर्दछ । तब मात्रै जनताले अशल सरकार र जनप्रतिनिधि चुनेको महसुस गर्नेछन् । हामी विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । तर वैदेशिक लगानी भिœयाउन नसक्ने हो भने हामीले यो क्षेत्रको विकास गर्नै सक्दैनौं । ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न वैदेशिक लगानी भिœयाउनु नै पर्छ । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । हुन त यो सरकारप्रति मेरो समर्थन छैन । एउटा कुनामा प्रतिपक्ष बसेन भने सरकार मनपरी गर्न पुग्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि हाी प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्दैछौं । हामी बहुलवादको समर्थन गछौं । सरकाको मनपरी हुन नदिन हामी खबरदारी गर्नेछौं । सरकारले हाम्रा सुझाव र योजनालाई सहज रूपमा ग्रहण गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
यहाँ जडिबुटी छ, खानी छन् भनेर भाष्ण गरेर मात्र होइन, त्यसको उपयोग गर्न सरकार लागोस् । हामी प्रतिपक्षबाट पनि सहयोग गर्न तयार छौं । हामी यो प्रदेश समृद्ध भएको हेर्न चाहन्छौं । हामीले भुत र वर्तमानलाई मात्रै सम्झियौं भने भविष्य सुन्दर बनाउन सक्दैनौं । हामीले भोटको मात्रै राजनीति होइन जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्नुपर्नेछ । त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्दछ । सरकारले जनताको पक्षमा काम गरे हामी समर्थन गर्दै जानेछौं र तर जनताको पक्षमा काम नगरे खबरदारी गर्नेछौं । यो प्रदेश समृद्ध बनाउने दायित्व हामी सबैको हो ।
‘चुनौतीसहित अवसरहरू पनि छन्’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समग्र प्रदेशको आर्थिक विकास र दिगोको शान्तिको पक्षमा छ । हाम्रो पार्टी फरक पहिचान र मूल्य मान्यता बोकेको पार्टी हो । त्यसैले वर्तमान संविधानप्रति हाम्रो केही फरक मत रहेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने राप्रपा सधैं सबै दलहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्न तयार छ ।
यस प्रदेशमा जति चुनौती छन् त्यति अवसर पनि छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिचान, प्रयोग, उत्पादनलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकेमा नमुना प्रदेशको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो सामु थुप्रै चुनौतीहरू छन् । हामी संघीयता कार्यान्वयको चरणमा छौं । हामीले यस अवस्थामा सरकारलाई सही बाटोमा डो¥याउन र सरकारका नकारात्मक काम कारबाहीलाई सकारात्मक बनाउनेगरी भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिपक्षको आवश्यकता छ । त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो प्रदेश सरकारको विपक्षमा मत जाहेर गरेको छ ।